Liverpool oo markii 6-aad ku guuleysatay Koobka Champions League | Allmareeg Online
Home Ciyaaraha Soomaalida Liverpool oo markii 6-aad ku guuleysatay Koobka Champions League
Kooxda kubadda cagta ee Liverpool ayaa markii 6aad ku guuleysatay Koobka Horyaalada Qaaradda Yurub ee UEFA Champions League, kaddib markii ciyaartii kama dambeysta ee Finalka ay 2-0 uga adkaatay Tottenham.
Liverpool ayaa aheyd kooxda loo saadaalinayay koobkan, kaddib markii is aragii labaad ee Sema Finalka ay si cajiib leh uga soo badisay Kooxda Barcelona oo ay gurigeeda ugu adkaatay 4-0.
Daqiiqadii u horeysay ciyaarta ayaa waxaa Liverpool waxaa Rigoore u dhaliyay Ciyaaryahan Salah, kaddib markii kubad uu Mane tuuray ay gacanta uga dhacday ciyaaryahan Mousa Sissoko oo u ciyaara Tottenham.
Ciyaarta Qeybtii hore ayaa ku soo dhamaatay 1-0 oo ay ku hoggaamineysay Liverpool, waxaana jiray fursado dhif ahaa oo labada koox heleen.
Dhamaadkii ciyaarta ayaa Liverpool heshay goolkii labaad, kaasoo uu dhaliyay ciyaaryahan Divock Origi oo bedel ku soo galay, waxaana uu ahaa ninka quusiyay Barcelona ciyaartii Sema Finalka aheyd.
Ugu dambeyn garsooraha ciyaarta leylinaya oo u dhashay Slovenia ayaa ku dhawaaqay seeriga, iyadoo ciyaarta ku soo idlaatay 2-0 oo ay Liverpool ku badisay, kuna qaaday Koobkii Champions League oo ay ugu dambeysay sanadkii 2005-tii.
Previous articleRouhani:-Wadahadal caadaadis nagulama saari karo
Next articleNin Somali ah oo xaday dhowr Mobile oo xukun lagu riday
Ra’iisul Wasaare Ku xigeenka oo u ambabaxay Sacuudiga.
Aways Geedi - February 16, 2019 0
Ra’iisul Wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalka Soomaaliya (XFS), Mudane Mahdi Maxamed Guuleed (Khadar) oo ay wehliyaan wasiirada maaliyadda iyo xanaanada xoolaha ayaa maanta dalka Sacuudiga...